‘पलेँटी शृङ्खला’मा संगीतकार शान्ति ठटालले धुन भरेको मुना-मदन प्रस्तुत | Everest Times UK
‘पलेँटी शृङ्खला’मा संगीतकार शान्ति ठटालले धुन भरेको मुना-मदन प्रस्तुत
काठमाण्डौ ।नेपालयले आयोजना गर्दै आएको सांगीतिक कार्यक्रम ‘पलेँटी शृङ्खला’ मा संगीतकार शान्ति ठटालले धुन भरेको मुना-मदन प्रस्तुत भएको छ । कालिकास्थानस्थित नेपालयको ‘आर’शालामा प्रस्तुत भएको मुना-मदनले प्रेक्षायलमा उपस्थित श्रोता, दर्शक भावुक बनेका थिए । गायक, गायिका र वाद्यवादकका बीच हार्मोनियमका साथ उपस्थित शान्ति ठटालको मुहारमा पनि भावुकताको झलक पाइन्थ्यो ।
त्यसपछि शान्ति ठटालको संगीत सृजनाको पाटोको चर्चा भएको थियो । कार्यक्रम संचालन गरिरहेका पलेँटी संयोजक आभासले गायिकाबाट संगीतकारमा प्रवेश गर्दाको क्षण सम्झन अनुरोध गरे । ‘मैले सबैभन्दा पहिला धुन भरेका गीतमा मेरी भाउजू शशी ठटाल र अम्बर गुरुङका गीत पर्छन् । भाउजूले भानु जयन्तिका निम्ति भानुभक्त सम्बन्धि गीत लेख्नु भएको थियो । अम्बर गुरुङले रचेको गीत भने ‘म अचानक नै अडेँ’ थियो । संचालकको अनुरोधमा उनले सोही गीतको स्थाई गाएर सुनाउँदा उपस्थित दर्शक, श्रोताको तालीले ‘आर’शाला गुञ्जायमान भएको थियो । कार्यक्रम संचालकले ‘अम्बर गुरुङ आफैँ सफल संगीतकार हुनुहुन्थ्यो; उहाँले लेखेको गीत तपाईंको धुनमा सजिन कसरी आइपुग्यो ? भन्ने जिज्ञासा राख्दा शान्तिले भनिन्- ‘खै के लागेर हो ? अम्बर गुरुङले मलाई धुन भर भनेर यो गीत दिनुभयो । मैले धुन भरेँ । अम्बर गुरुङकै सामुन्नेमा सुनाउने आँट भने आएन । एउटा सांगीतिक जमघटमा मैले अम्बर गुरुङका सामुन्ने सुनाउन अनकनाएपछि, उहाँ अर्को कोठामा जानुभयो र मैले सुनाएँ । ‘हँसमुख शान्तिले अगाडि थपिन्- ‘नेपथ्यमा बसेर गीत सुनिरहेका अम्बर गुरूङको प्रतिक्रिया भने आज नभनूँ ! मेरै मुखबाट यो कुराभन्दा अलि बडप्पन हुन्छ ।‘ ठटालको यो धारणाको लगत्तै दर्शकदीर्घाबाट कवि मञ्जुलको आवाज सुनियो- ‘भन्नुस् न ! अम्बर दाइले त्यतिबेला के भन्नुभयो ?’ हिचकिचाइरहेकी शान्तिले भनिन्- ‘अनि ! भन्नु नै ?’ ‘भन्नुस् न !’ अम्बर गुरुङले भन्नुभयो- ‘यो गीतमा मैले नै धुन भरेको भए पनि यत्तिको राम्रो हुनेथिएन !’ अम्बर गुरुङ जस्तो मूर्धन्यको त्यो प्रतिक्रियाले मलाई संगीतकार बन्ने आत्मबल दियो ।‘ शान्तिको अभिव्यक्तिसँगै हल फेरि तालीले गुञ्जियो ।
फोटो: अविरा श्रेष्ठ / नेपालय